Ubusela bam obutsha-Ingcebiso ngooMama Namhlanje | Oomama Namhlanje
Unyana wam okwishumi elivisayo uyeba
UAlicia tomero | 01/06/2021 12:00 | Iingcebiso, Intsapho
Umntwana uqala kwinqanaba lakhe lokufikisa ngokuziphatha ekunzima ukuzakhela. Zama ukudala ukuzimela kwakho, ubunikazi kunye noxanduva. Konke oku kungakhokelela kwizimo zengqondo ezingaqhelekanga okanye ezifanelekileyo kolunye ulutsha kwaye ingxaki ivela xa kuqinisekisiwe ukuba 'umntwana wakho ofikisayo uyeba'.
Ukuziphatha kwabo kunokukhokelela kwizizathu ezahlukeneyo, uninzi lwabakwishumi elivisayo bayalthuthuzela olu hlobo lweemeko xa befuna ukuvuma ukuvukela kwabo njengesenzo sokufuna ukufumana igunya lakhe. Oonobangela banokwahluka kwaye uninzi lwabantwana luyala ukuba xa befuna ukuziphindezela kubazali babo ngenxa yokuba bephethwe kakubi. Kodwa izizathu esizibonayo apha ngezantsi zininzi ngakumbi.
1 Kutheni Umntwana Wam Eselula Eba?
2 Kuya kufuneka ufunde izizathu zengqondo ezikhokelela ekubeni umntwana wakho ebe
3 Ungajongana njani nale ngxaki?
Kutheni Umntwana Wam Eselula Eba?
Uninzi lwabantwana xa beqala kwinqanaba lokufikisa kubandakanya izinto ezininzi ekufuneka zithathelwe ingqalelo njengabantu abafikisayo okanye ngenxa yeenguqu zabo zomzimba. Uninzi lwazo lubonisa indlela yokuziphatha engafanelekanga ukungabikho kothando kunye nokuqwalaselwa ekhaya okanye kwindalo esingqongileyo.
Ukubabira sisimo sengqondo abasithathayo ukuphumelela isikhundla, ukuze bazive bethandwa okanye bevunywa ngoontanga babo. Ukongeza, ubusela bunokubaphembelela yenza i-adventure yokuziva umngcipheko: beba imali kubazali babo, beba izinto zefashoni ezivenkileni okanye beba izinto kwiivenkile ezinkulu.
Kuya kufuneka ufunde izizathu zengqondo ezikhokelela ekubeni umntwana wakho ebe
Ngokubanzi olu hlobo lokuziphatha lunxulunyaniswa ezinye iindlela zokuziphatha ezingafanelekanga: iingxoxo eziqhubekayo kunye nabazali babo, ukulawulwa kwezinto ezinje ngeziyobisi okanye utywala okanye ukuxhatshazwa ngokwesini. Oku kunokuxelwa kuba umntwana ofikisayo uhamba umzuzu apho ifuna uncedo kunye nokuqonda.
Uthando nokuqonda lelona yeza lilungileyo elinokubakho kusapho. Nangona sele bekwishumi elivisayo kwaye kubonakala ngathi abafuni nkxaso, kuxa kanye bafuna kakhulu uthando lwabazali. Amabinzana afanelekileyo kunye nokuziphatha ngaphakathi kweyunithi yosapho ngumzekelo wothando ukuze kubekho into evisisanayo ngakumbi.
Ungajongana njani nale ngxaki?
Bekusoloko kusithiwa kufuneka umzekelo ekhaya ngokuba ngabazali abangumzekelo ukwenzela ukuba abantwana bangalandeli iipateni ezifanayo. Ukuba umntwana ukhuliswe ngokunyaniseka, umbulelo kunye noxabiso ngomzekelo wethu, sele baya kuba ziintsika ezisisiseko zokuba nabantwana abanexabiso elifanayo.
Kukho oko bonisa umntwana wakho iziphumo zokuba, kuba inokubanjwa ziiarhente zamapolisa. Ipolisa linokuthetha nomntwana wakho kwaye linxibelelane naye ukuba isenzo sakhe sityala kwaye oko kungakhokelela kwiziphumo ezibi kwikamva lakhe.
Thetha ubuso ngobuso nomntwana wakho uzolile, ubuze ukuba kutheni kwaye oko kuye kwakhokelela kweso simo sengqondo. Mhlawumbi unganceda ukusombulula ukuba unalo naluphi na uhlobo lwentlungu. Ukuba uyala ukuthetha ngalo mbandela, unganikezeli, zama ukumenza agobe kwinqanaba elithile kwaye uhlala ethetha ngothando.
Sukumgweba njengexoki okanye isela gweba isimilo okanye isenzo, kodwa ungamgxeki njengomntu ombi. Ukohlwaya ngokuqatha akusebenzi, kwaye abanye abafumani into ayenzayo, okanye izoyikiso. Oku kuyakwandisa ezinye ezininzi Ubuxoki, umsindo, umsindo, ingqumbo kunye nemvukelo.
Into ebalulekileyo kukuba umntwana wakho abonakalise oko akwenzileyo, abonise ukuba anganyaniseka kwaye ukubhengeza ukuba ikhe yenzeka ngamanye amaxesha. Kwiimeko ezininzi kufuneka uthathe amanyathelo okubuyisa into oyibileyo kunye nokucela uxolo kuye nakubani na ofunekayo.
Kuyimfuneko ukuba ukuba unyanisekile naye Ndikuvuza ngokufikelela kule njongo. Sukumphatha njengesaphuli-mthetho kwaye ungalahli ithemba kuyeUkusuka apha kunokubonwa ukuba abazali baziva uthando kunye nokuncoma abantwana babo. Sisenzo esinye esenzelwe unyana wakho ofikisayo uzive ukhuseleke ngakumbi kwaye wandise ukuzithemba kwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Unyana wam okwishumi elivisayo uyeba
Kutheni umntwana wam engatyebi?
Siyintoni isizathu sokuziva benetyala koomama abaninzi?